Soo dejisan SplitCam 10.1.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: SplitCam
SplitCam – software ah si loo kordhiyo fursadaha aad webcam. feature ugu weyn ee SplitCam waa awood u leh inay isticmaasho webcam mar in labo ka mid ah barnaamijyada ama adeegyada isgaadhsiinta video. software waa ay awoodaan in ay ku dar waji 3D iyo xirto in wejiga, bedesho taariikhda, codsan filtarka, ku dar alaabta kala duwan iyo saamaynta kale video aad webcam inta lagu guda jiro isgaarsiinta video ah. SplitCam falgala wargeeyayaashii oo caan ah ama adeegyada chat video oo ku baahin karo il video ku dhufto ee Streaming caan ah. Sidoo kale SplitCam kuu ogolaanayaa inaad soo qabto qayb ka mid ah loo baahan yahay ee shaashadda oo ka dhigaysa ka Screenshot of a window video hadda.
Qaybsama of il video ah
Isticmaalka saamaynta video kala duwan inta lagu jiro isgaarsiinta video
Qorista videos in HD
Qabsashada of video oo laga helay ilo kala duwan
Soo dejisan SplitCam
Faallo ku saabsan SplitCam
SplitCam Xirfadaha la xiriira